CUDURADA CAADIGA AH EE CHERRY MACAAN IYO DAGAAL ADAG OO IYAGA KA GEES AH - DARYEELKA CHERRY EE MACAAN
Cudurada cherry qabow: ka hortagga, calaamadaha iyo daaweynta
Dhibaatada ugu yaraan hal qof qaangaar ah ama ilmo ah oo aan wax danbi ah u lahayn geedka. Bilawga xagaaga ayaa sugaya sabar la'aan, qayb ahaan sababtoo ah waqtigaan sanadka wuxuu keenayaa berry macaan iyo casiir leh. Waxaa laga yaabaa in ninkii beerta ka shaqeeyaa, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu jeclaan lahaa in uu leeyahay jardiinada macaan ee beerta si uu naftiisa iyo kuwa uu jecel yahay u helo miro fiican oo dhadhan fiican leh.
Si kastaba ha ahaatee, badanaa beerista geedkan waxaa lagu xayiray dhibaatooyin, taas oo, ugu horreyntii, waxay la xiriirtaa dagaalka ka dhanka ah cayayaanka iyo cudurada. Cudurada cherry qabow, ka hortagga iyo daaweynta ayaa looga doodi doonaa maqaalkan.
Bacteriosis (Boogaarka ama Kansarka Cherry)
Sida magacaagu yahay, bakteeriyadu waa cudur bakteeriyadeed. Geedaha da'doodu u dhaxayso 3-8 sano ayaa ku xiran. Bakteeriyadu waxaa ku jira roob iyo dabayl. Xilliga jiilaalka, waxay ku nool yihiin burooyinkeeda iyo weelasha geedka.
Qoyaan qoyan iyo qabow leh cimilo badan oo roobab iyo hawada dabayshu waxay ku kordhisaa faafitaankooda inta lagu jiro dhammaan xubnaha dhirta.
Laamihii geedaha buka ayaa lagu daboolaa boogaha, cirridka ayaa ka soo baxa. On caleemaha iyo miraha, dhibco of qaabka aan joogto ahayn brown ama madow leh jaarka huruud ah muuqan. Peduncle ayaa daboolay nabarrada brown yar.
Qoryaha geedo ka mid ah geedahan way dhintaan, caleemuhu way dhintaan. Mararka qaar waa la googooyaa si buuxda. Bacteriosis ma dhici karto haddii xagaaga uu yahay mid diiran oo qalalan.
Daaweynta. Waqtiga xaadirka ah, qaababka wax ka qabashada cudurkaan ma jiraan, maaha wax aan la shaacin oo la yiraahdo cherry cherry. Nooc kasta oo ah cherry macaan ayaa waxaa lagu gartaa caqabadaha kale ee bakteeriyada.
Geedaha helaya nafaqada nitrogen ee lagama maarmaanka ah iyo waraabinta dhexdhexaadka ah ma aha mid aad u dhib u ah cudurkan.
Xinjiraha Brown (phyllostiktosis)
Badanaa waad go'aamin kartaa haddii geedkaagu uu caafimaad qabo ama uusan si taxadar leh u baarin caleemaha. Waxay yihiin kuwa ugu horreeya ee bixiya dhirta cudurka qaba.
Haddii si lama filaan ah xilliga kormeerka waxaad aragtay dhibco yar oo caleenta ah oo caleenta ah, ka dibna cudurka ayaa niyadjabaya - cherry macaanku wuxuu ku jiraa phyllostikosis ama spot brown.
Tani waa cudur fungal ah oo mustaqbalka u muuqda inuu yahay dhibco madow oo caleemo ah, xanuunka fangaska jiran. Muddo ka dib, caleemaha geedkii buka ayaa qalalay iyo dhac.
Daaweynta. Caleemaha saameynaya waa in la ururiyaa oo la gubaa wakhtiga. Ka hor inta aanad jabin, daawaynta 1% dareeraha Bordeaux, 1% sulfate copper iyo nitrafen ayaa lagu talinayaa. Dib-u-farsamaynta waxaa lagu fuliyaa ka dib markii ubax Bordeaux ah (laba ilaa saddex toddobaad).
Laba toddobaad ka dib, waa suurad wacan in lagu buufiyo fangaska "Home". Xaaladda infekshinka daran, daaweyn kale ayaa la sameeyaa xilliga dayrta, ka dib marka caleen dhacdo. Isticmaal 3% oo ah dareeraha Bordeaux.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan ku buufin jeeriga, waa inaad la tashato xeerarka amniga. Kuwa ugu muhiimsan waa: Daaweynta waa in lagu sameeyaa jawi qallalan, cimilo degan, indhaha waa in la ilaaliyaa muraayadaha, iyo afka iyo sanka - oo leh maaskaro.
Tan iyo markii uu ka soo baxo fungus pathogenic, kaas oo soo jiidaya dhibco madow, oo ku dhaafa caleemaha dhacday oo hoos geedka hoostiisa, xilliga dayrta waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh looga saaro caleemaha qallalan oo dhulka dhulka ku qodo wareegga pristvolnom.
Cudurka kale ee fungal - xoqitaanka dufanka ama klyasterosporioz - wuxuu ku dhacaa guga leh dhibco madow oo leh mugdi (casaan mugdi ah, casaan) xuduudaha caleemaha, laamaha, burooyinkeeda, ubaxa.
Iyada oo ay sabab u tahay luminta unugyada saameeya ka dib hal ama laba todobaad meelahooda caleemaha waxaa la sameeyaa godad. Miraha cudurrada leh ayaa marka hore la daboolay calaamadaha casaan-gaduudka iyo habka koritaanka ufilan foomamka fool xun.
Jidhka meeshan ayaa joojiya koritaanka iyo hoos udhaca lafta. Haddii uu cudurku ku faafo geedka oo idil, waxa uu jilicsan yahay wakhti ka dibna wuxuu dhali karaa miro xun.
Daaweynta. Lafaatiirta iyo caleemaha ay saameeyeen dhibcaha dilaacay ayaa la jaraa oo gubay. Xidibyada waxaa lagu daaweeyaa 1% xal sulfamer ah, oo lagu suuxay sorrel (saddex goor 10 daqiiqo) oo lagu daboolay garoonka beerta ama rinjiga saliidda.
Inta lagu jiro "casuus" ee burooyinkeeda, isla markiiba ka dib ubax iyo laba ama saddex toddobaad kadib, johriga waxaa lagu buufin karaa 1% Bordeaux dareere ama naxaas wanaagsan (25 g halkii 10 l oo biyo ah). Sidoo kale daaweynta ka dib marka la saaro laamaha jirran ayaa isticmaala daroogada "Chorus".
Tilmaamo been ah
Qalabka been ah waxaa loola jeedaa cudurada fungal ee asliga ah ee cherry macaan. Astaamaha ugu weyn ee cudurka - kallana caddaan ah ee qoryaha. Caadi ahaan waxay ku dhuftey dillaac dhinaca qaybta hoose ee jir - jaale ah, bunni ah, koritaanka brown mugdi ayaa la aasaasay.
Xannuunada funguska fangaska waxay ku degaan nabarrada on jilif ee geedo ka timaadda qoraxda, soo-saarka dhaxan, ama waxyeello cayayaanka. Geedka xanuunsan wuxuu noqonayaa mid jilicsan oo si fudud u dabooli kara dabaysha.
Daaweynta. Si looga adkaado dhidibada been abuurka ah, raridda iyo gubista geedka ayaa noqon doona tallaabooyinka ugu wanaagsan ee lagu dagaalamo. Haddii aysan suurtagal ahayn, markaa waa inaad si joogto ah u eegtaa geedka iyo ka saartaa koritaankii soo muuqday.
Boogaha la abuuri doono sababtoo ah nidaamkan ayaa u baahan doona in la nadiifiyo, lagu daaweeyo bakteeriyo naxaas ah iyo daboolay beerta beerta. Si looga hortago, dhammaan tallaabooyinka waa in la qaadaa si looga fogaado dhaawaca farsamada ee kortex. Waxaa lagu talinayaa in la caddeeyo jirridda iyo laamaha qalfoofka.
Sulfur jilicsan jaalaha ah
Caabuq kale oo fangas ah ee asliga ah ee cherry macaan waa baaritaan baaruud-jaalaha ah. Waxay u keentaa kalluun qolof leh oo caleemo leh kaas oo dildilaaca la mycelium la sameeyay.
Qoryaha ayaa jaban oo burburiya. Calaamadaha cudurka waa fangaska oo lagu sameeyay cillad jilicsan oo leh koofiyado qashin ah oo ah orange ama midab huruud ah.
Daaweynta. Si looga hortago cudurkan inuu ka soo baxo jiirarka, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin looga hortagayo samaynta dildilaaca barafka ee jilif. Xilliga dayrta waxay muhiim u tahay in la caddeeyo guntinta iyo laamaha qalfoofka. Guga ka dib qaboojiyaha gaar ahaan qabowga si uu u sameeyo dhar.
Haddii aanay suurtagal ahayn in laga fogaado barafka iyo sunburn, meelahaas waa in la nadiifiyaa, la nadiifiyaa oo rinjiyeeyaa. Marka boqoshaada la dejiyo, geedka waa in la burburiyaa ama si joogta ah looga saaraa koritaanka iyo nadiifinta nabarrada.
Xilliyada roobabku waxay ku kicin karaan kookhiyoomka loo yaqaan 'chocolate'. Astaamaha astaamuhu waa caleemaha casaan-yar ee caleemaha. Caleemaha saameeyeen waxay noqdaan huruud marka hore, ka dibna buni, oo ugu dambeyntii dhacaan. Sannadaha hore ee cudurka, cherry macaan ayaa lumisa midhihiisa, ka dibna naftiisa u dhinto.
Daaweynta. Daaweynta ka hortagga cherry macaan laga sooco cocomycosis waxaa lagu sameeyaa xilliga bararka kelyaha. Mashiinka ugu horeeya waxa ugu fiican oo la sameeyaa kiniiniga sulfate (300 g 10 litir oo biyo ah).
Marka ay burooyinku bilaabaan inay Bloom, waxaad u baahan tahay inaad ku buufin isku dar ah Bordeaux. Waxa kale oo muhiim ah in la ilaaliyo xeerarka agrotechnical ah ee geedaha midhaha sii kordhaya, kuwaas oo ka mid ah burburinta caleemaha saameeyeen, miraha iyo qodaya dhulka ku hoos taajka of cherry macaan.
Si aad u xoqdo, waxaad isticmaali kartaa mukhaadaraadka noocan oo kale ah sida "Homes", "Zorus", "Topaz", "Horus". Sidaas darteed diyaarinta aan la maydhin, saabuunta dharka lagu dhaqo ayaa lagu daraa xalalka.
Waa muhiim! Haddii uu cudurku ku faafay wax badanna buufinta saddexaad loo baahan yahay inta lagu jiro xilliga kuleylaha, ka dibna si looga fogaado gubashada caleenta, waxaad ku daboosha laanta koowaad ee dareeraha Bordeaux. Marka maqnaanshaha gubashadu ku jirto maalmo yar waxaad ku qaban kartaa taajka geed dhan.
Cudur aad u badan waa cherry ciridka. Waxay ku dhacdaa geedo waxyeello leh oo ka dhalata dhaxan ama ay saameeyeen moniliasis, qanjidhada ama cuduro kale.
Waxaa lagu muujiyey qarsoodi ah caleemaha cirridka (dhoobada), marka la qaboojiyo qaabeynta qaabka muuqaalka hufan.
Daaweynta. Si looga hortago cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo caabinta jiilaalka ee geedka, bacrimiya si habboon oo biyo ah. Waa in la nadiifiyaa tuubooyinka, nabarrada waa in la nadiifiyaa oo lagu daboolaa garoonka beerta ama nigroolka (70% nigrol + 30% ash qashin). Meelaha cirridka cirridka, cayayaanka fudud ee jilifka ayaa lagula talinayaa.
Mosaic Cherry Cudurka
Cudurka Mosaic waa cudur fayruus ah oo keenaya in si xoog leh u daciifiyo nidaamka difaaca ee johnta. Calaamadaha jirrada: marka hore, jilicsanaan jaale ah ayaa ka muuqda xididdada caleemaha caleemaha, ka dibna caleemaha cirridka buka oo jirran, u caleemo oo u dhintaan.
Fayrasku waxa uu ku faafaa cayayaanka, inta lagu jiro tallaalka gooynka bukaanka iyo manjooyin geedo buka oo caafimaad qaba oo leh qalab aan laysku tirtirin.
Daaweynta. Ma jirto wax daawo ah. Waa laga hortagi karaa oo kaliya - geedaha cayayaanka ka daaweeya cayayaanka, ilaalinta tallaabooyinka karantiilka, iyadoo la isticmaalayo qalab beerto caafimaad leh. Laga soo bilaabo bukaanka qaba jeeriga, nasiib daro, waa in laga takhaluso.
Calaamadaha muuska masjidka ayaa ka muuqda caleemaha caleemaha cagaarka ah - cagaarka cagaaran ama kuwa cirridka ah ayaa lagu sameeyaa iyaga, kaas oo marka dambe daadi kara, godadka ayaa weli ku jira meeshan.
Daaweynta. Isla la mid ah sida cudurka maskaxda.
Ma taqaanaa? Cudurada maskaxdu waxay ku dhici kartaa geedka muddo sannad ah, iyo garaaca maskaxdu waxay dhici kartaa laba sano.
Cudurka fangasku wuxuu halis u yahay geedo yar yar iyo inta lagu jiro goynta. Cudurku waxa uu la mid yahay hoos u dhaca koritaanka dhirta iyo dhimashada hore ee caleen.
Calaamadda ugu weyn ee xagta uumiga budada ah waa caddaan (iyo ugu dambeyntii wasakhda miisaanka ah) deebada budada ah ee waraaqaha iyo caleemaha. Caleemaha curyaanka ah waxay u nugul yihiin, qalalan waxayna u dhintaan.
Daaweynta. Si loola dagaallamo khafiifinta budada ah, daawooyin badan ayaa la soo saarey: Topaz, Phytodoctor, Strob, iwm. Kuwa kale waxay isticmaalaan daawada saddex-laab leh 2% kolloid kolloid ama 2% lime-sulfur mudo 15 maalmood ah, xal aqueous of Kansar dhalaanka iyo faleebo ah hay haye.
Jeex jeex jeex ah
Maskaxdu waxay waxyeeleysaa caleemaha jeeriga, dhibco madow muuqata iyaga. Muddo ka dib, waxay ku duuduubaan tuubo oo ay qalalaan. Miraha cagaaran sidoo kale qalaji.
Daaweynta. Dhulashada, burburinta miraha iyo caleemaha cudurka qaba, saddex jeer (inta lagu jiro go'doominta burooyinkeeda, ka dib marka ubax, goosashada ka dib) ku buufin leh dioxide chlorine (40 g / 10 l oo biyo ah) ama 1% dareere Bordeaux.
Qalalan gogol (monilioz)
Calaamadaha moniliosis waxaa lagu arkay isbedel ku dhaca midabka caleemaha iyo laamaha geedka - waxay noqdaan bunni. Maadaama uu cudurku ka sii darayo, laamuhu waxay noqdaan kuwo culus, sida haddii la gubay. Kadibna, kororka cawlka yar ayaa ka muuqda jilifka geedka.
In habdhaqanka aamusan, koritaanka sidoo kale waxay ka muuqan doontaa midhaha of cherry macaan, berry ka bilaabaan in qudhmi, qalalaan. On laanta qadiimka ah, meelaha ay kalluun graashu degeen, dildilaaca ayaa la sameeyay, kaas oo cirridka mar dambe daba socdo.
Daaweynta. Tan iyo fungus waa wakiilka keena ee jiilaalka Monilla ee miraayadaha iyo laamaha mummified, burburinta wakhtiga ah ee berry jirran, laamood iyo caleemo waa shardi ah in dagaalka ka dhanka ah kalluunka casaan.
Horumarinta moniliosis waxaa caqabad ku ah dayrta dayrta ee gogolka iyo laanta qalfoofka. Sida cudurrada badankood, kalluunka ciriiriga ayaa la dagaalami karaa buufiyo fangasoof ah. Waxa kale oo muhiim ah in la sameeyo tallaabooyin ka hortag ah si loo tirtiro cayayaanka halista ah.
Ma taqaanaa? 100% jeeriga oo ay waxyeeleeyeen cayayaanka ayaa leh jeermis.
Tsilindrosporioz (cad cad)
Iyada oo cudur cudur leh oo cad, caleemaha dhibcood daaqsinka dhexe ee xagaaga. Fungus wuxuu ku dhuftaa qoryaha laanta, boogaha ayaa u muuqda, iyaga oo cirridku u socdaan.
Kabaha ayaa noqda casaan-bunni ama madow-madow. Geedaha oo daciif ah oo awoodi kara, iyada oo aan ka badbaado dhaxan daran, hoos u guga guga.
Daaweynta. Kala saarista iyo gubashada laamaha buka. Maadaama infekshanku uusan gashanayn jilif caafimaad qaba, waa lagama maarmaan in la raaco tallaabooyinka lagu daryeelo isla markaana isla markiiba daweeyo dildilaaca iyo boogaha ay sameeyaan cirridka, jeermis-dilista iyo dhuxusha. Sidoo kale waxay ubaahantahay in ay wax ka qabato cayayaanka waxyeeleeya cayayaanka.
Cudurka fungal, korniinka kelida ah ama kooxuhu waxay ku muuqdaan jilibka laamood ee dhintay.
Daaweynta. Gooyo iyo gubasho laanta fungus-saameysey. Daaweynta nabarrada leh garoonka beerta.
Ka hortagga iyo ilaalinta johannesiyada cudurada
Waxaan ku qeexnay nooca johanneselka cudurada iyo sida loo daaweeyo. Macluumaadkani wuxuu kaa caawin doonaa sidii loo ogaan lahaa dhibaatooyinka koritaanka johuuska si loo ogaado iyaga isla markiiba ay bilaabaan in ay tirtiraan, si aanay u lumin dalagga.
Si kastaba ha noqotee, tallaabooyinka ka hortagga ah ayaa horay u soo maraan marka xalinta dhibaatooyinka. Ilaalinta ka hortagga ee jeeriga macaan, ee mabda'a ah, waxay la mid tahay mid ka mid ah geedaha midhaha oo dhan. Tan waxaa ka mid ah:
nadiifinta waqtigeeda iyo gubashada caleemaha dhacday iyo miro jabsan;
khafiifinta dhoobo culus;
qodaya sirqoollada xag jirka ah;
Ku buufinta ka hortagga kahor bilawga cabitaanka casiirka: HOL (700 g / 10 l oo biyo ah), dareeraha Bordeaux (100 g / 10 l oo biyo ah), sulphate copper (100 g / 10 l oo biyo ah),
Ku celcelinta daaweynta ka hortagga ka dib bilowga ubax;
dayac tirka dayrta kahortaga ka dib marka la qabsado berry;
daaweynta daawooyinka kor u qaada xasilloonida cherry macaan ee xaaladaha iyo xaaladaha halista ah, sida "Zircon", "Ecoberin".
Sidaa darteed, daaweynta ugu fiican ee cudurada waa u hoggaansamaan xeerarka agrotechnical iyo daryeel taxadar leh oo waqtigiisii, taas oo gerriga kuugu mahadcelin doonaa goosashada deeqsi ah ee berry delicious.